20.000 oo bukaan ah oo ku nool UK ayaa ka faa'iideysta kaarka caafimaadka Cannabis ee loo yaqaan 'Cancard'. • Dawooyinka Inc.eu
Warbixinno cusub ayaa tilmaamaya in illaa 20.000 kun oo qof oo ku nool Boqortooyada Midowday ay hadda isticmaalaan kaararka caafimaadka ee xashiishadda ee uu bilaabay Cancard sanadkii hore. Kuwa la nool xaalado u qalma, oo ay ku jiraan sclerosis badan iyo kansar, way dalban karaan inay helaan Kanadkan. Tani waxay ka hortageysaa halista in loo xiro isticmaalka xashiishka loo isticmaalo ujeeddooyin daawo.
Waxaa lagu qiyaasaa in kudhowaad 1,4 milyan oo qof oo ku nool Boqortooyada Midowday ay hada iskood iskaga daaweynayaan xaalado dhowr ah oo salka ku haya xashiishadda suuqa madow. In kasta oo xashiishadda caafimaadka laga sharciyeeyay Boqortooyada Midowday sannadka 2018, haddana tiro yar oo bukaanno ah ayaa warqad dhakhtar ka helay NHS.
Nidaamka gaarka ahi wuxuu siinayaa ikhtiyaarka dadka aan awoodin inay bixiyaan rugo caafimaad oo gaar loo leeyahay ama dawooyinka gaarka loo leeyahay ee la xidhiidha. Bukaanku waxay ka codsan karaan Cancard iyaga oo u maraya GP-gooda oo leh xaalad u qalmid ah lacag yar oo ku dhow £ 20 rodol.
Kaarku wuxuu u cadeynayaa sharci fulinta in kaarka heysta "uu leeyahay xaalad u qalmid oo xashiishad caafimaad loo qori karo". Warbaahinta ayaa ku warramaysa in 96% kaararka haysta ay awood u yeesheen inay ka fogaadaan xarig illaa iyo hadda iyagoo muujinaya Kaadhka.
Kaadhadh ay soo aliftay bukaanjiifka xashiishadda caafimaadka Carly Barton
Cancard waxaa uuraysatay Carly Barton, oo ah bukaanka xashiishadda caafimaadka iyo taageere, waxaana loogu talagalay fikradaha dhakhaatiirta iyo wakiillada sare ee Xiriirka Booliska. Carly Barton waxay ka mid ahayd bukaanno badan oo daahfuray in xashiishadda caafimaad ay gargaar ka bixiso dhibaatooyinkeeda caafimaad - fibromyalgia iyo neuropathy kadib istaroog.
Kaarka waxaa sameeyay Carly Barton (afb.)
Ka dib markii uu iskiis isku daweeyay xashiishadda sharci darrada ah, Carly wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Boqortooyada Ingiriiska kaasoo helay warqad dhakhtar xashiishad caafimaad oo gaar loo leeyahay 2018. Waxay markaa ku doodday in bukaanku si fiican u helo dawooyinka xashiishka ku saleysan ee bukaannada kale.
In kasta oo xaqiiqda ah in xashiishadda caafimaadka ay hadda sharci ahayd in ka badan laba sano, haddana waxaa la rumeysan yahay in wax ka yar 100 qof ay ka heleen dawo qorista iyada oo loo marayo NHS illaa iyo hadda. Bukaannada u qalma badankood waxay u jeestaan ​​rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay halkaasoo xaddidnaanta hadda jirta ay tahay mid aad qaali u ah.
Kharashka la-talinta gaarka ah iyo baahida loo qabo in daawooyinka laguu qoro si loo oggolaado takhtar takhasus leh ayaa macnaheedu yahay in bukaanno badan lagu qasbay inay u jeestaan ​​ilo sharci darro ah oo ay ka helaan daawooyinkooda. Sida uu qabo sharciga UK ee hada, dadka lagu qabto xashiishad iyagoo aan warqad dhakhtar qorin, waxay la kulmi karaan ciqaab xabsi oo gaaraya ilaa shan sano iyo ganaax aan xad lahayn.
Ujeedada Cancard waa in la yareeyo khatarahaas lagana ilaaliyo dadka nugul dhibaataynta. Ra'yi aruurin laga sameeyay YouGov oo la sameeyay sanadkii 2019 ayaa lagu ogaaday in 1,4 milyan oo qof ay hada isticmaalaan xashiish sharci daro ah daawo ahaan. Xogta ayaa sidoo kale soo jeedinaysa in 2 milyan oo dheeraad ah ay u qalmi karaan xashiishad caafimaad oo dhakhtar qoray.
Ilaha ay ka midka yihiin Cancard (EN), Canex (EN), Waqtiyada (EN)
cannabissharciyeyntasharci-dejintadaawo cannabisdaawada cawskaBoqortooyada Ingiriiska
Hawlgalladda Holland oo bilaabay mashruuc xawli ah oo xashiishad ah BitCanna
Noocyada caanka ah ee xashiishadda adduunka ayaa diyaar u ah inay lacag la'aan noqdaan oo ay ka faa'iideystaan ​​dhammaan fursadaha ...
Deeq bixiyuhu wuxuu bixiyaa € 8 ee Harvard iyo MIT si ay u bartaan marijuana
Waxaan rabaa inaan sumcad daro ku sameeyo wada hadalka xashiishka - taasna waxay ka dhigan tahay, qayb ahaan, waxaan u baahanahay xaqiiqooyin…
Maalin miyeey jirtaa? Booqo matxafka cannabis ee Amsterdam oo wax ka barto taariikhda cannabis
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato dhirta xashiishka cannabis oo aad dareento inaad la kulanto qof kale ...
Guddiga Yurub wuxuu ansixiyay CBG inay tahay qayb sharci ah oo loogu talagalay qurxinta iyo daryeelka maqaarka
Rugta caafimaadka ee ugu horraysa ee Scotland ee xashiishadda caafimaad waxay soo jiidataa in ka badan bukaanno 500 usbuuca furitaanka
Numinus Wellness waxay daraasad caafimaad ku samaynaysaa 14 qof oo caafimaad qaba oo psilocybin si dabiici ah loo helay